U-Alexander Dumas utata kunye nonyana. IziKhumbuzo Amanye amabinzana. | Uncwadi lwangoku
U-Alexander Dumas utata kunye nonyana. IziKhumbuzo Amanye amabinzana.
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Iincwadi, Inoveli, Amabali
El 24 de julio de 1802 ezelwe UAlexander dumas kunye neminyaka engama-22 kamva, nge-27 kaJulayi nayo, wazalwa unyana wakho nanjalo Alejandro. Kungenzeka ukuba yiAlexandros edume kakhulu eFrance kwaye ngokuqinisekileyo zimbini ze Ababhali abadumileyo ngalo lonke ixesha, ingakumbi utata.
Kusaza kubakho umhlali kulo mhlaba ngubani khange afunde incwadi yakho. Kodwa ngokuqinisekileyo akunakwenzeka ukuba kukho umntu ongambonanga ibhayisikobho esekwe kwiinoveli zakhe. Kwaye ukuba kukho umntu ongakhange eve ngezo ncwadi apho, kungenxa yokuba ngokuqinisekileyo ayiveli kweli hlabathi. Iyinyani kwaye iyafana nezinto eziza kuhlala zikho okanye amabali ohlobo oluphakamileyo nothando olubi. AbakwaDuma azinakoyiswa kwaye, ngokomthetho, enye yeencwadi zakhe kufuneka ifundwe okanye iphinde ifundwe rhoqo ngonyaka. Masihlale kunye amanye amabinzana akhe.
Uyise ka-Alexander Dumas
Zonke zinye, enye yazo zonke.
Amadoda kunye namagorha, zimbini iintlobo zemonons ezijongeka zifana.
Abathandekayo esiphulukene nabo abaphumli phantsi komhlaba, kodwa sibathwala ezintliziyweni zethu.
Zimbini iinkangeleko: Ukubonakala komzimba ngamanye amaxesha kunokulibala, kodwa oko komphefumlo kuhlala kukhumbula.
Ngokubanzi, iingcebiso azifunwa ngaphandle kokungazilandeli; okanye, ukuba bayalandelwa, kukuba nomntu onokuthi abekw 'ityala ngokubanika.
Isikhohlakali asihleki ngendlela efanayo nendoda ethembekileyo, umhanahanisi akalili ngeenyembezi njengendoda ethembekileyo. Bonke ubuxoki busisigqubuthelo sobuso, kwaye nokuba imaski yenziwe kakuhle kangakanani na, umntu angasoloko, ngononophelo oluncinci, eyahlula ebusweni.
Ukuthula lulonwabo lokugqibela lwelishwa; lumkela ukubeka umntu, nokuba ungubani na, kumkhondo wentlungu yakho; Umnqweno ufunza iinyembezi zethu njengeempukane zitsala igazi kwixhama elonzakeleyo.
Kuza kuhlala kukho imilebe ethetha into ngelixa intliziyo icinga enye.
Ubukumkani bam bukhulu njengehlabathi, kuba andinguye umTaliyane, okanye umFrentshi, okanye umNdiya, okanye umMerika, okanye iSpanish; Ndingumntu wonke.
Bonke ububi buneendlela ezimbini; ixesha nokuthula.
Amanxeba okuziphatha anokufana nokuba afihliwe, kodwa awavaleki; zihlala zibuhlungu, zihlala zilungele ukopha xa uchukumisiwe, zihlala ziphila kwaye zivulekile entliziyweni.
Eyona nto inomdla ebomini ngumbono wokufa.
Nguye kuphela owazi amashwa agqithisileyo onako ukuziva ulonwabo oluphezulu. Kuyimfuneko ukuba ubufuna ukufa, ukuze wazi ukuba bumnandi kanjani ubomi.
UAlexander Dumas unyana
Intliziyo yinto yokugqibela ephuma emhlabeni kunye nenkumbulo into yokugqibela ephuma entliziyweni.
Ndikhetha abakhohlakeleyo kunama-imbeciles, kuba abo, ubuncinci, bashiya indawo yokuphefumla.
Kumfazi ongafundiswanga kakuhle, uThixo uhlala evula iindlela ezimbini ezikhokelela ngasemva, iintlungu nothando.
Ubugcisa bufuna wedwa, usizi okanye ukuthanda. Yintyatyambo yeliwa efuna umoya ombi kunye nomhlaba ombi.
Bekungayi kuba lilize ukuba ilizwe liguge ukuba ibingelilo ukuzilungisa.
Imali ligunya ekuphela kwalo elingaxoxwayo.
Nantoni na enokutshintshwa ngokulula inokushiywa ngokulula.
Andisosityebi ngokwaneleyo ukuba ndikuthande ngendlela endifuna ngayo okanye ndilihlwempu ngokwaneleyo ukuba ndikuthande ngendlela ofuna ngayo.
Zingaphi iindlela ezenziwa yintliziyo kwaye zingaphi izizathu ezifumanekayo zokufikelela koko ikufunayo!
Iimpendulo ezilindelwe ngolangazelelo zihlala zisiza xa umntu engekho ekhaya.
Ulutsha luhlala luzincama ngokunyaniseka luthanda izinto ezithandabuzekayo.
Hayi indlela ekhohlakele kwaye ekhawulezayo ngayo indoda xa enye yeemvakalelo zakhe ezilusizi ziziva zenzakele!
Izivumelwano azinakusoloko zisenziwa ngemini yokusayina
Ngaba uyabona into elusizi kunaleyo yobudala yobubi, ngakumbi kwabasetyhini?
Uhleli unobuntwana, nokuba ubuyintoni.
Kumnandi kangakanani ukucengwa lilizwi elithandekayo!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » U-Alexander Dumas utata kunye nonyana. IziKhumbuzo Amanye amabinzana.
Bathi ukuphinda ufunde kukunyamezelwa ziincwadi ezilungileyo kuphela ngokungathandabuzekiyo "iiMusketeers ezintathu" ngumzekelo woku. Andizukuthetha minyaka le, kodwa qho emva kwesithathu okanye sesine kumnandi kakhulu ukuqala uhambo lwabo. Konke okugqibelele.
Iilwandle ezintlanu zoncwadi okhe waya kuzo